संसारकै सबैभन्दा महँगो कफी ! « News of Nepal
संसारकै सबैभन्दा महँगो कफी !
तपाईं हामीले कैयौँ रेष्टुरेन्ट तथा क्याफेमा गएर कफी पिएका छौँ होला । र, कफीका विभिन्न प्रकार पनि चाखेका छौँ । तर के तपाईंले दुनियाँकै सबैभन्दा महँगो कफीको स्वाद लिने मौका पाउनुभएको छ ?
अमेरिकामा रहेको एउटा क्याफेले दुनियाँकै सबैभन्दा महँगो कफीको स्वाद चखाउँदै आएको छ ।
उक्त क्याफेको नाम क्लेच क्याफे हो । त्यहाँ कफीको मूल्य प्रतिकप ७५ डलर पर्दछ । यति महँगो हुँदाहुँदै पनि मानिसहरु सो क्याफेमा गएर कफी पिउन मरिहत्ते गर्दछन् ।
सन फ्रान्सिस्को र दक्षिण क्यालिफोर्निया गरी दुई ठाउँमा यो क्याफेका शाखा रहेका छन् । त्यो महँगो कफीको नाम नेचुरल गिशा ८०३ हो ।
एक लिलामीका क्रममा उक्त कफीको यस्तो अनौठो नाम जुरेको रहेछ । लिलामीका क्रममा एक पाउण्ड कफी ८ सय ३ डलरमा बिक्री भएको थियो । त्यहीँ बेलादेखि नै सो कफीको नाम नेचुरल गिशा ८०३ रहन गयो ।
वास्तवमा यसअघि यो कफीको केवल ४५ किलोमात्र बिउ बिक्री हुन्थ्यो र अधिकतम कफी जापान, चीन ता ताइवानमा निर्यात हुन्थ्यो । तर अहिले अमेरिकाको क्लच क्याफेले यसलाई बहुमूल्य तथा लोकप्रिय मात्र होइन विश्वकै सबैभन्दा महंगो बनाइदिएको छ ।
उक्त क्याफे मालिकका अनुसार क्लच क्याफेका लागि केवल ४ किलो कफी मात्रै उपलब्ध छ । उत्तर अमेरिकामा आफु बाहेक अन्त कहीँ पनि यो कफी उपलब्ध नभएको उनको दाबी छ । सोही कारण यो दुर्लभ कफीको स्वाद चाख्न मानिसहरु चर्को मूल्य चुकाउन तयार छन् ।
यो कफीको वास्तविक नामचाहिँ पनामा कफी हो । यो कफी निकै उत्कृष्ट जातको कफी हो । विश्वको कफी प्रतियोगितामा पनि यो कफी सर्वोत्कृष्ट ठहरिसकेको छ । मध्य अमेरिकामा पाइने दुर्लभ अरेबिका कफीको एउटा जात हो पनामा कफी । यसको स्वाद चियाको जस्तो हुन्छ । चमेली तथा बेरीको स्वाद पनि यसबाट आउँछ ।
क्रिकेट ईतिहासकै दुर्लभ घटना, सबै खेलाडी शून्य रनमा
दिसाबाट तुरून्तै मल हुने चर्पी बन्याे
तातो चिया पिउनेलाई क्यान्सरको खतरा !
के तपाईं रातभरि मोबाइल चलाउनुहुन्छ, ध्यान
प्रहरी निरीक्षक स्व. दाहालको पशुपति आर्यघाटमा..
सेफ्टी ट्यांकीमा श्रीमतिको लास फालेर विवाहभोज..
रुपन्देहीमा धारिलो हतियार प्रहार गरि महिलाको..
तुम्बाहाम्फेलाई सभामुख बनाउन माग
आइतबार शैक्षिक संस्था बन्द
शिक्षक दरबन्दी सार्वजनिक
धनुषा विस्फोटको प्रारम्भिक अनुसन्धानः राजेश साहको हत्या नै गर्ने मूख्य उद्देश्य
भ्रमण वर्षको प्रचारप्रसार गर्दै सचिवालयको टोली ओमनमा
प्रहरी निरीक्षक स्व. दाहालको पशुपति आर्यघाटमा स–सम्मान दाहसंस्कार
सेफ्टी ट्यांकीमा श्रीमतिको लास फालेर विवाहभोज र जन्ती हिडेपछि
रुपन्देहीमा धारिलो हतियार प्रहार गरि महिलाको हत्या